सिरिज जित्ने नेपालको उद्देश्य, यी हुन् जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्ने ३ आधार | KhelNepal
सिरिज जित्ने नेपालको उद्देश्य, यी हुन् जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्ने ३ आधार
सिंगापुरमा जारि त्रिकोणात्मक टि-२० सिरिज अन्तर्गत सुरुवाती ३ खेलको परिणामले सिरिजमा रोमान्चकता ल्याएको छ। सुरुवात ३ खेलमा जिम्बाब्वे, नेपाल र सिंगापुर तिन वटै टिमले १/१ खेल जित्दै सिरिज जित्ने दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। टेस्ट राष्ट्र भएता पनि नेपाल र सिंगापुरले जिम्बाब्वेलाई राम्रै चुनौती प्रस्तुत गरिरहेको छ।
सिरिज अन्तर्गत नेपालले आफ्नो तेश्रो खेलमा जिम्बाब्वेसंग खेल्दैछ। सिरिज जित्ने लक्ष्यका साथ सिंगापुर पुगेको नेपाली टिमसंग जिम्बाब्वेसंग पहिलो हारको बदला लिने मौका पनि रहेको छ। सिंगापुरले जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्दा नेपालबाट पनि जिम्बाब्वे बिरुद्ध जितको अपेक्षा राखिएको छ। पहिलो ३ खेल सकिंदा सबै टिममा १/१ जित रहेता पनि नेट रनरेटमा नेपाल अघि रहेको छ। जिम्बाब्वेलाई पराजित गरेको खण्डमा नेपालले सिरिज जित्ने सम्भावना प्रवल हुनेछ।
खेल समय , लाइभ कहाँ हेर्ने : नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल मंगलबार नेपाली समय ( अक्टोबर १ ) बेलुका नेपाली समय ५:१५ बजे र सिंगापुर समय ७:३० बजे सुरु हुनेछ। इन्डियन एसोसीएसन मैदानमा खेलिने खेल फ्लडलाइटमा खेलिनेछ। खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएसनको फेसबुक पेजले गर्नेछ भने युट्युबमा पनि Wec Sports च्यानल मार्फत खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण हुनेछ। खेलको अपडेट विकेटनेपालको फेसबुक पेज र वेबसाइटमा पनि हुनेछ।
नेपालले जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्न सक्ने ३ आधार
१. पछिल्लो खेलले दिएको आत्मविश्वास
पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसंग ५ विकेटले पराजित भएता पनि खेलमा जिम्बाब्वेको जित सहज भने थिएन। नेपालले दिएको १३३ रनको लक्ष्य पछ्याउदा एक समय जिम्बाब्वेले ६४ रनमा ५ विकेट गुमाईसकेको थियो।खेल नेपालको पकडमा आइसक्दा रायन बर्ल र रिचमण्ड मुतुम्बामीले नेपालको जित खोसेका थिए। खेलमा पराजित भएता पनि नेपालले जिम्बाब्वेलाई पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास भने पाएको छ। अझ सिंगापुरले जिम्बाब्वेलाई पराजित गरेपछि झनै जित्न सकिन्छ भन्ने नेपाली टिमको विश्वास बढेको छ।
पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएपछि कप्तान पारस खड्काले ब्याटिंगमा १०-१५ रन अरु बनाउन सकेको भए जित्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। दोश्रो खेलमा नेपालले ब्याटिंगमा सुधार पनि देखायो। यस्तै पहिलो खेलमा नेपालले अन्तिम-११ छनौटमा गरेको गल्ति गरेको थियो। दोश्रो खेलमा सन्दिप जोराको स्थानमा सुशन भारि खेलाउदै ५ जना बलर लिएर खेल्दा टिम सन्तुलित देखिएको थियो। पहिलो २ खेलले नेपाली टिममा आत्मविश्वास बढेको छ भने टिम सन्तुलित र लयमा पनि देखिएको छ। यही आत्मविश्वासले नेपाललाई जित दिलाउन सक्छ।
सन्दिप लामिछाने र पारस खड्का जस्ता म्याच विनर खेलाडीले एक्लो दममा खेल जिताउन सक्छन्
२. एक्लो दममा खेल जिताउन सक्ने खेलाडीहरु
जिम्बाब्वे बिरुद्ध सन्दिप लामिछाने चम्किदा हारको बाबजुद नेपालले टेस्ट राष्ट्र बिरुद्ध राम्रो खेल प्रदर्शन गरेको थियो। नेपालको प्रदर्शन पछाडी सन्दिप लामिछानेले महत्वपूर्ण योगदान थियो र झन्डै एक्लै दममा खेलको नतिजा पल्टाइदिएका थिए। पहिलो खेलमा ४ ओभरमा १५ रन मात्र खर्चेर ३ विकेट लिएका सन्दीपले सिंगापुर बिरुद्ध पनि ४ ओभरमा मात्र १८ रन खर्चिएका थिए। दुवै खेलमा सन्दिपको लय उत्कृस्ट हुनु बिपक्षी टिमको लागि घातक हुनसक्छ।
यस्तै नेपाली टिमका सदाबहार म्याच विनर पारस खड्काले सिंगापुर बिरुद्ध बनाएको शतकले खेल मात्रै हैन बिपक्षीको होस उडाएको थियो। पारसले ५२ बलमा ७ चौका र ९ छक्का प्रहार गर्दै टि-२० अन्तर्राष्ट्रियमा लक्ष्य पछ्याउदै शतक बनाउने पहिलो ब्याट्सम्यानको विश्वकीर्तिमान समेत आफ्नो नाम गरे। जिम्बाब्वे बिरुद्ध पहिलो खेलमा १८ रन मात्र बनाएर आउट भएका पारस आज जिम्बाब्वे बिरुद्ध चल्ने हो भने एक्लै दममा खेल्न जिताउन सक्छन्।
सन्दिप र पारस जस्ता म्याच विनरको उपस्थिति नेपालको बलियो पक्ष हो। त्यति मात्रै हैन दुवै खेलमा अविनाश बोहराको डेथ ओभर बलिंग उत्कृस्ट रहेको थियो। जसरि जिम्बाब्वेले सिंगापुरसंग अन्तिमको ओभरहरुमा रन बनाउन नसकेर हार बेहोरेको थियो त्यसरीनै यदी अविनाश बोहरा जस्ता बलर चल्ने हो भने त्यही हालत नेपालसंग पनि नहोला भन्न सकिन्न। दुइ खेलमा खास प्रदर्शन गर्न नसकेता पनि टिममा रहेका सोमपाल कामि, करन केसी, दिपेन्द्र ऐरी जस्ता खेलाडीहरु एक्लो दममा खेल जिताउन सक्ने क्षमता राख्नेगर्छन्। जिम्बाब्वे बिरुद्ध यही खेलाडीहरुले आफ्नो दममा खेल जिताउन सक्छन्।
३. नेपालको टिम सन्तुलन
पहिलो खेलमा जिम्बाब्वे बिरुद्ध हार बेहोर्नुको कारण नेपालको टिम सन्तुलन थियो। एक जना बलरको अभाव हुँदा दिपेन्द्र ऐरी, कुशल मल्ल जस्ता बलर प्रयोग गर्नु परेको थियो। दुवै बलर महँगो सावित हुन पुग्दा एउटा पूर्ण बलरको टिममा जरुरत महसुस भएको थियो। सोहि आवस्यकता महसुस गर्दै टिमले दोश्रो खेलमा सुशन भारिलाई खेलायो। भारीले नेपालको लागि डेब्युमै राम्रो बलिंग गरे र एउटा महत्वपूर्ण विकेट लिएर किफायती बलिंग समेत गरे।
अविनाश बोहरा उत्कृस्ट लयमा रहेका छन्
ब्याटिंगमा ओपनर इशान पाण्डे नचालेता पनि अर्का ओपनर पारस खड्का सुरुवात देखि क्रिजमा हुनुले सुरुवातबाट बिपक्षी टिम दबाबमा हुने गर्छन्। पारस एक किनारमा रहंदा अन्य ब्याट्सम्यानले समेत कम रिस्क लिने अवस्था रहन्छ। जसरि सिंगापुर पराजित हुँदा आसिफ शेखले ३९ रन बनाएका थिए त्यसरी पारस क्रिजमा हुनुको फाइदा ननस्ट्राइकर ब्याट्सम्यानले उठाउन सक्छन्।
नेपालको ब्याटिंग लाइन अप निकै बलियो देखिन्छ। इशान पाण्डे, पारस खड्का, आरिफ शेख, दिपेन्द्र ऐरी, कुशल मल्ल, बिनोद भण्डारी ६ जना मुख्य ब्याट्सम्यान तथा तल्लो क्रममा सोमपाल कामि, करन केसी जस्ता भरपर्दो अलराउण्डरको उपस्थितिले ब्याटिंगमा गहिराइ रहेको छ। तल ब्याट्सम्यान रहेकाले माथिको ब्याट्सम्यानमा पनि दबाब कम हुने गर्छ।
बलिंगको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली टिम परिपक्व देखिन्छ। सोमपाल कामि लयमा नरहेता पनि उनि बाहेकका बलरहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो निभाइरहेका छन्। सन्दिप लामिछानेको ४ ओभर बिपक्षी टिमका ब्याट्सम्यानलाई क्रिजमा टिक्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। अर्को तिर अविनाश बोहराले अन्तिमको ओभरहरुमा गर्ने लगार योर्करमा ब्याट्सम्यानहरुको अन्तिममा ठुलो रन बनाउन सक्दैनन्। देब्रे हाते स्पिनर सुशन भारिले बीचको ओभरमा रन रोक्दै विकेट लिएर दबाब बनाउन सहयोग गर्छन् भने करन केसीले सुरुवाती विकेट लिंदै तथा बीचमा आएर साझेदारी तोड्न सक्ने क्षमता छ।
यो हिसाबले नेपाली टिम निकै सन्तुलित देखिन्छ। योग्य ब्याट्सम्यान, अलराउण्डर , बलर तथा म्याच विनरको उपस्थितिले टिम बलियो देखिन्छ। त्यसैले जिम्बाब्वे जस्तो टिमलाई हराउन पनि सक्षम रहेको छ।
नेपालको कमजोर पक्ष
नेपालको टिम सन्तुलित देखिएता पनि केहि कमजोरीले भने टिमलाई सताइरहेको छ। ब्याटिंग लाइन अप बलियो देखिएता पनि ओपनिंगमा पारसको जोडीको रुपमा रहेका इशान पाण्डेको फर्म नेपालको चिन्ता हो। पाण्डे पहिलो खेलमा ४ तथा दोश्रो खेलमा ५ रन बनाएर आउट भएका थिए। माथिल्लो क्रम नेपालको बलियो देखिदा यदी माथिल्लो ब्याट्सम्यानले चाडै विकेट गुमाएको अवस्थामा तल्लो क्रममा भरपर्दो ब्याट्सम्यानको भने अभाव रहेको छ। बिनोद भण्डारी र कुशल मल्लले अझै आफुलाई भरपर्दो ब्याट्सम्यानको रुपमा प्रदर्शनमा निरन्तरता दिन सकेका छैनन्। अझ जिम्बाब्वे बिरुद्ध बिनोद भण्डारी पहिलो खेलमा ठुलो रन बनाउने आवस्यकता हुँदा १२ बलमा मात्र ११ रन बनाउनुले निकै आलोचित समेत भएका थिए।
सोमपाल कामि लयमा छैनन्
बलिंगको कुरा गर्दा सोमपाल कामि बाहेक करन केसी, सन्दिप लामिछाने, अविनाश बोहरा र सुशन भारिले राम्रो बलिंग गरिरहेका छन्। सोमपालले भने दुवै खेलमा विकेट विहिन रहंदा पहिलो खेलमा ३ ओभरमा २५ रन तथा दोश्रो खेलमा ४ ओभरमा ४४ रन खर्चिएका थिए। सुरुवाती विकेट दिलाएर बिपक्षीलाई दबाब बनाउन सक्ने सोमपाल लयमा नहुनु नेपालको कमजोर पक्ष हो।